समाचार – Page 277 – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
काँग्रेसको गढमा एमाले बिजयी, पोखरा ८ मा रुद्र
पोखरा, ४ जेठ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर ८ नेपाली काँग्रेसको गढ मानिन्छ । तर स्थानीय चुनावमा नतिजा फरक आएको छ । काँग्रेसलाई पछि पार्दै एमाले उम्मेदवार बिजयी भएका छन् । वडाध्यक्षमा एमालेका रुद्र नाथ बरालले काँग्रेसका उम्मेदवार शारदा गिरीलाई १ सय..
एजेन्सी, ३ जेठ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मतदान गरेको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर २ मा नेपाली कांग्रेसले विजय हासिल गरेको छ । ओलीको निवास रहेकै कारण एमालेको मजबुत वडाका रुपमा हेरिएको सो वडामा कांग्रेसले जितेपछि..
गोर्खाको अजिरकोट गाउँपालिकामा कांग्रेस विजयी
गोरखा, ३ जेठ । गोर्खाको अजिरकोट गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुबै पदमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ । अध्यक्षमा फणीन्द्र धिताल र उपाध्यक्षमा चन्द्रमायाँ गुरुङ बिजयी भएका हुन् । धितालले माओवादी उम्मेदवार दीपक देवकोटालाई ३३१ मत अन्तरले पराजित गरे ।..
पोखरा ६ को २४४७ मतगणना
पोखरा, ३ जेठ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर ६ मा काँग्रेसको अग्रता कायम छ ।..
जिसीलाई पछ्याउँदै कुवँर, १ सय १२ ले पछाडी
पोखरा, ३ जेठ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको हालसम्मको मत परिणाम अनुसार एमाले उम्मेदवार मान बहादुर जिसीलाई काँग्रेस उम्मेदवार रामजी कुवँरले पछ्याईरहेका छन् । जिसी १ सय १२ मतले मात्रै अगाडी छन् । वडा रामजी कुवँर सरस्वती गुरुङ मान ब. जिसी मन्जु..
पोखरामा हालसम्म को अगाडी ?
पोखरा, ३ जेठ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा स्थानीय तहको मतगणना जारी छ । हालसम्म ४ वटा वडामा मतगणना सकिएको छ भने थप चार वडामा मतगणना जारी छ । वडा नम्बर १ मा एमाले बिजयी भएपनि २, ३ र ४ नम्बर वडामा काँग्रेस बिजयी भयो । मतगणनामा हालसम्म महानगर प्रमुख र उपप्रमुखमा..
पोखरा ७ मा एमालेको अग्रता
पोखरा, ३ जेठ । स्थानीय तहको जारी मतगणना अनुसार पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका स्थित वडा नम्बर ७ मा काँग्रेस अगाडी छ । ५ सय मतगणनामा काँग्रेस उम्मेदवार रामजी कुवँरले १ सय ९२ मत पाएका छन् । एमाले उम्मदेवार मान बहादुर जिसीले २ सय १७ मत पाए । उपप्रमुखमा काँग्रेसकी..
रामजीको वडामा काँग्रेस अगाडी
पोखरा, ३ जेठ । स्थानीय तहको जारी मतगणना अनुसार पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका स्थित वडा नम्बर ६ मा काँग्रेस अगाडी छ । ५ सय मतगणनामा काँग्रेस उम्मेदवार रामजी कुवँरले २ सय ८२ मत पाएका छन् । एमाले उम्मदेवार मान बहादुर जिसीले १ सय ६२ मत पाए । उपप्रमुखमा काँग्रेसकी..
पोखरा, ३ जेठ । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार युवराज कुवँर विजयी भएका छन् । कास्कीका ४ गाउँपालिका मध्ये तीन वटा एमाले र एउटा मात्रै काँग्रेसले जितेको हो । कुवँरले निकटतम प्रतिद्धन्द्धी एमालेका उम्मेदवार बिष्णु केसीलाई २ सय..